आज मिति २०७७, चैत २३ गते सोमबार दिन ग्रहदशा अनुसार तपाईंको राशीफल हेर्नुहोस्।(भिडियो सहित) – Nepali news portal
आज मिति २०७७, चैत २३ गते सोमबार दिन ग्रहदशा अनुसार तपाईंको राशीफल हेर्नुहोस्।(भिडियो सहित)
२३ चैत्र २०७७, सोमबार ०८:१८ April 5, 2021 काठमाडौं डेष्क
मेष : आज तपाईंलाई बाहिर सैर गर्नाले र आनन्दको सैरले राम्रो मुडमा राख्नेछ। लगानीको लागि सिफारिस गरिन्छ तर उचित सल्लाह लिनु आवश्यक छ। परिवारका सदस्यहरूले तपाईंका दृष्टिकोणको समर्थन गर्नेछन्। रोमान्स रोमाञ्चक हुनेछ – त्यसैले तपाईंलाई मनपर्ने व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्नुहोस् र दिनलाई उत्तम बनाउनुहोस्। कामको समयमा तपाईंका कामको प्रशंसा गरिनेछ। आफ्नो जोडीले जब सबै कुराहरू भूलेर तपाईंलाई माया गरेर अँगाल्नेछन्, तब जीवन साँच्चै रोमाञ्चक हुनेछ।
वृष : सामाजिक जीवनको भन्दा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। प्रेम-सङ्गति र सम्बन्ध गाँसिनेमा वृद्धि हुने। प्रेम परमेश्वरको उपासना गरेजस्तै हो; यो धेरै धार्मिक हो साथै आध्यात्मिक पनि हो। तपाईंलाई यो आज थाहा हुनेछ। सेवकहरू – सहकर्मी र सह-कामदारहरूको समस्यालाई छोड्नु सकिंदैन। तपाईं आज यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो सामानको अतिरिक्त हेरचाह गर्न आवश्यक छ। तपाईंको वैवाहिक जीवन आजभन्दा रंगीन कहिल्यै भएको थिएन।
मिथुन : तपाईंको दयालु प्रकृतिले आज धेरै खुसीयाली ल्याउनेछ। आफ्नो कामको दक्षतामा वृद्धि गर्न नयाँ प्रविधीमा बानी बसाल्नुहोस् – तपाईंको शैली र राम्ररी काम गर्ने अद्वितीय तरीकाले तपाईंलाई छेउबाट हेर्दै गरेका मानिसहरूलाई चासोको विषय हुनेछ। कर र बीमाको विषयमा केही ध्यान दिनु आवश्यक हुनेछ। यो दिन तपाईंका जीवनको वसन्त जस्तै छ; रोमान्सले पूर्ण, तपाईं र तपाईंको जीवनसाथी।
कर्कट : बोल्नु अघि दुई पटक सोच्नुहोस्। अनजानमै तपाईंको दृष्टिकोणले कसैका भावनाहरूमा चोट लाग्न सक्छ। तपाईंले आफ्नो परिवारको कति ध्यान गर्नुहुन्छ भन्ने महसुस गराउन मौखिक र गैर मौखिक सन्देश दिइरहनुहोस्। आनन्दलाई दुइ गुणा बढाउनको लागि आफ्नो गुणस्तरीय समय खर्च गर्नुहोस्। तपाईंको लागि प्रेम हावामा छ। मात्रै वरिपरि हेर्नुहोस्, सबै कुरा गुलाबी छ। पत्राचारको संचयलाई धेरै प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता हुनेछ। आफ्नो जोडीको निर्दोष कार्यले आज तपाईंको दिन शानदार बनाउनेछ!
सिंह : जीवनमा गम्भीर मनोवृत्ति नल्याउनुहोस्। दिनको उत्तरार्द्धको लागि रोमाञ्चक र मनोरंजक केही ठीक गर्नुहोस्। प्रेमी जीवन आज विवादास्पद हुन सक्छ। काममा आजको दिनलाई उत्कृष्ट बनाउन तपाईंको आन्तरिक शक्तिले पनि उत्तिकै सहयोग दिनेछ। तपाईंले आफ्नो जोडीको कुनै काम बारे अप्ठ्यारो महसुस गर्न सक्नु हुनेछ। तर पछि यसलाई राम्रोको लागि भएको हो भन्ने महसुस गर्नु हुनेछ।
कन्या : आज तपाईंमा आफ्ना परिवारका सदस्यहरू र साथै साथीहरूबाट सहयोग प्राप्त गर्नाले नयाँ उत्साह र आत्मविश्वास जाग्नेछ। यस दिनलाई एउटा विशेष दिन बनाउन थोरै प्रेम र दया दिनुहोस्। महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग बातचीत गर्दा आफ्ना कान र आँखा खुल्ला राख्नुहोस् – किनकि तपाईंले एउटा मूल्यवान टिप पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा सानो प्रयासले, आजको दिन तपाईंको वैवाहिक जीवनको सबैभन्दा राम्रो दिन बन्न सक्छ।
तुला : केही मानसिक दबाब भए तापनि स्वास्थ्य राम्रो हुनेछ। तपाईंले जानेका मानिसहरूको माध्यमबाट आयका नयाँ स्रोतहरू उत्पन्न हुनेछन्। सम्पूर्ण परिवारलाई समावेश गर्ने मनोरञ्जनमा धेरै मजा हुनेछ। तपाईंको प्रेमीले साझेदार गरेका सामाजिक मिडियाका पछिल्ला केहि स्थितिहरु जाँच गर्नुहोस्; तपाईंलाई सुन्दर आश्चर्य प्राप्त हुनेछ। आज तपाईंको कलात्मक र रचनात्मक क्षमताको धेरै प्रशंसा हुनेछ र अनपेक्षित पुरस्कार प्राप्त हुनेछ। यो तपाईंका सम्पूर्ण वैवाहिक जीवनको न्यानो दिन रहेको छ।
वृश्चिक : धेरै चिन्ता र तनाउले उँचो रक्तचाप हुन सक्छ। अरू मान्छेको सुझाव सुन्ने र काम गर्ने यो एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हो। यात्राले मायाप्रिती फैलाउनेछ। तपाईंले कुनै पनि नयाँ परियोजना लिनु अघि दुई पटक सोच्नुहोस्। तपाईंका आज आमाबाबुले कुनै साँच्चै नै आश्चर्यजनक कुराले तपाईंको जोडीलाई आशीर्वाद दिन सक्छन जसले अन्ततः तपाईंको वैवाहिक जीवनमा विकास ल्याउनेछ।
धनु : आफ्नो उँचो ऊर्जा आज सदुपयोगको लागि खर्च गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। जवानहरूले स्कूल परियोजनाहरूको लागि केही सल्लाह माग्न सक्छन्। अचानक आएको रूमानी हावाले तपाईंको आत्मालाई उँभो उठाउनेछ। बाँकी रहेका परियोजना र योजनाहरू अन्तिम आकार लिन उत्प्रेरित हुनेछन्। यो विवाहको उज्यालो पक्ष अनुभव गर्ने दिन हो।
मकर : आफ्नो दीर्घ रोग निको पार्न मुस्कान चिकित्साको प्रयोग गर्नुहोस् किनकि यो सबै समस्याको लागि उत्तम विषनाशक औषघि हो। तपाईंको जोडीले आनन्द दिने प्रयास गर्नाले आज आनन्द भरिएको दिन हुनेछ। के तपाईंले कहिल्यै अदुवा र गुलाबसँगको चकलेट सुँघ्नुभएको छ? तपाईंको प्रेमी जीवन आज त्यस्तै स्वादिलो हुनेछ। व्यवसायीको लागि राम्रो दिन। व्यापारको उद्देश्य लिएर अचानक गरिएको यात्राले सकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्छ। आज मान्छेहरूले तपाईंको प्रशंसा गर्नेछन् – जुन तपाईंले सधैं सुन्न चाहनु हुन्थ्यो। तपाईंको आफ्नो जोडीसित तनाउपूर्ण सम्बन्ध हुनेछ र अब हुनुपर्ने भन्दा लामो रहने गम्भीर असामंजस्यताहरू हुन सक्छन्।
कुम्भ : तपाईं आफ्नो सोखको लागि वा तपाईंलाई सबैभन्दा आनन्द लाग्ने कुरा गर्न आफ्नो अतिरिक्त समय खर्च गर्नुपर्छ। तपाईंका हातबाट सजिलै धन खर्च भए तापनि – तपाईंका भाग्यशाली ताराले आर्थिक लाभ बनाइ रहनेछन्। आफन्त / मित्रहरू अद्भुत साँझको लागि आउन सक्छन्। रोमान्टिक अमूर्तताले तपाईंको आनन्दमा मसला थप्नेछ। तपाईंले पेशावर रूपमा महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरू समयमा पूरा गरेर राम्रो लाभ कमाउनु हुनेछ। केही मनोरञ्जनका लागि राम्रो दिन। आज, तपाईं फेरि आफ्नो जोडीसँग प्रेममा पर्नु हुनेछ।
मीन : केही मानसिक दबाब भए तापनि स्वास्थ्य राम्रो हुनेछ। तपाईंको केटाकेटीको जस्तो र निर्दोष व्यवहारले परिवारको समस्या समाधान गर्नमा निर्णायक भूमिका खेल्नेछ। आफ्नो प्रियको। काममा व्यावसायिक रवैयाले प्रशंसा प्राप्त हुनेछ। आज सहजताको कमीले गर्दा तपाईँ आफ्नो वैवाहिक जीवनमा निस्सासिएको महसुस गर्न सक्नु हुन्छ। तपाईंले राम्रो बातचीत गर्नु चाहिं आवश्यक छ।
खाना पकाउने ग्याँस सिलिन्डरभित्र लागुऔषध लुकाउने दुईजना पक्राउ